Namuhla e Chelyabinsk unemisebenzi ukuzivocavoca yonke ukunambitheka kanye nesabelomali. Ake sicabangele imininingwane yezemidlalo ethandwa kakhulu nezikhungo zezempilo yedolobha. Yiziphi amakilabhu impilo Chelyabinsk libanakekele kwasekuqaleni?
Siqala indaba yethu mayelana engcono impilo amakilabhu Chelyabinsk nezikhungo ngokuthi "Birch". Okuhle wathi isikhungo yezemidlalo ukuthi uyakwazi ukwamukela izivakashi kulo lonke isonto, amahora angu-24 ngosuku. Awukwazi kuphela unciphise umzimba futhi alethe umzimba ithoni, kodwa futhi baphumule ngemva komsebenzi, ukuxhumana abadlali professional, esazini.
Inikeza club "Birch":
pool ezinkulu ezigcwele manzi acwebe njengekristalu okungukuthi ukuhlanzwa ngaphandle chlorination;
ejimini yesimanje, okuyinto efakwe anhlobonhlobo imishini yamuva;
platform ukhululekile semisebenzi ukuqina;
ukuqina ibha, ukukhonza iziphuzo okunomsoco futhi unempilo non-utshwala;
Ukufaneleka club "Citrus" (Chelyabinsk), akuyona kuphela ngobukhulu yezemidlalo emzini, kodwa futhi kuso sonke isifunda. endaweni yayo ihlanganisa mayelana 5000 m 2.
Club izivakashi angabona ukuthi uphuma njani imali engaphezu kuka-150 zama-akhethiwe izinhlelo ngabanye kanye neqembu lenhlangano ukuqeqeshwa. Ngesikhathi nokulahla izindawo imishini etholakalayo futhi imishini kusukela abakhiqizi engcono, njenge: Everlast, Legend Ukufaneleka, Hammer Amandla nabanye. Nasi ejimini ahlukene nobuciko bokulwa, kanye professional isibhakela indandatho.
"Colosseum" - a club imfanelo (Chelyabinsk), okuyinto has a inkundla yokudlala enkulu nge imishini yesimanje hhayi kuphela, kodwa futhi ikamelo esikhethekile amakilasi CrossFit. Kukhona futhi amakamelo ahlukene, okuyinto zingahlelwa amakilasi ku uhlelo ngabanye.
Yimaphi amanye amasevisi ahlinzekwa "eColiseum"? Ukufaneleka club (Chelyabinsk), ibha, ukukhethwa olubonakaliswa iziphuzo Wellness namandla. Ngaphezu kwalokho, e kwekilasi ngamunye ayatholakala kumakhasimende sauna infrared uphumule ngemva Amazing ezikhathazayo.
"Bear Russian" - a club imfanelo (Chelyabinsk), okuyinto has lonke iqoqo abaqeqeshi professional leyo Kungase kudingeke izinhlelo zokuphepha olunzulu Imininingwane body Workout. Izivakashi yizindawo etholakalayo:
eziningi izinhlelo zokuqeqesha kwabantu kanye namaqembu;
Seen umdanso amahholo (bachata, zumba, umzimba ballet, tango Argentina);
emakilasini ukuhlubula plastic.
Ukubukeza amakilabhu impilo Chelyabinsk uzinake isikhungo ngaphansi yokuqala igama ChocoLad. Leli kamelo libukeka ekahle kakhulu amantombazane kanye guys abangekho nje zokuqalisa nge umsebenzi. abasubathi Advanced lapha kungase kungabi abaqeqeshi ngokwanele, kusukela yokugcina kungukuthi kabili ehholo, kanye abe nesisindo esakhelwe kunalokho nesizotha.
Izinzuzo esemqoka imfanelo club kuthiwa kubangelwa: Ukuthuthukiswa ejimini abanekhono, a ezimnandi, ukuphumula umoya, khona abafundisi ongumakadebona, izisebenzi qakala ngamunye amaklayenti ngabanye.
Ukufaneleka club has yavula ikamelo layo elikhulu kakhulu eziphilayo, ahlotshiswe omnyama abomvu uhlelo nolaka enikeza ukuqeqeshwa. Institutions ungakwazi kusimangaze izivakashi kukhona arsenal ebanzi zonke izinhlobo imishini. Cishe zonke izinto ukuqina liphindwe kabili. Ngakho-ke, ngaphambi abasubathi ingekho nge ukulinda uhlu nkinga.
Ngokuvamile okuhle club House of Pain ubukeka isixazululo enkulu kubagijimi abangekho kakhulu induduzo etotoswayo. Phakathi izinzuzo main ehholo ukunikeza ezihlukahlukene umsebenzi imishini, kungenzeka eklasini bafundza incwadzi kanye nomqeqeshi abanekhono siqu, abasebenzi ikukhonzile.
Ngakho sabuka amakilabhu impilo Chelyabinsk ezidumile phakathi bendawo. Yiqiniso, ohlwini samanje siqukethe akubona bonke ezemidlalo kanye nezikhungo zezempilo yedolobha. Nokho, lezi sites bheka kakhulu ayethanda kokubili abasubathi abanolwazi kanye Wabasaqalayo.
Kungani ukusebenzisa ezingavamile kungakuzwisa ubuhlungu emuva yakho nendlela yokugwema kuso?